A umlingisi omkhulu, a screenwriter kanye nomqondisi abanamakhono. Konke lokhu kumayelana oyedwa - Kulagin leonid Nikolaevich (06.07.1940). umlingisi Hometown kuyinto Kirensk - idolobha elincane laseSiberia, esisogwini loMfula ULena. Lapho eseneminyaka eyisithupha, umkhaya wathuthela ezweni kayise - e Gorky.
Njengoba kuvela, leonid ebuntwaneni wazizwa khona wemifula emikhulu - the Yelena futhi iVolga - empilweni yami. Njengoba amagama emifuleni abesifazane, ngaleso sikhathi kuqhubeke ukuphila kwakhe ngaso sonke isikhathi sihambisana owesifazane. Leonid Kulagin njalo ethola ukusekelwa ukusekelwa ungaphakathi abesifazane, futhi kukho konke ukuphila kwakhe ayekuthanda kubhekwe kubo abangane bakhe abathembekile.
Izinyathelo zokuqala kule nkundla
Ngaqala umsebenzi wami leonid Kulagin? Biography of umlingisi uthi ethiyetha wamletha uyise lapho esebenza khona ngogesi. Ngemva kwesikole, umfana waya kuyise, wahamba ekusithekeni futhi ungase ukubuka wonke ukusebenza. Esikhathini yaseshashalazini efanayo umlingisi odumile esizayo owokuqala wathatha esigabeni in the play "Guard Young". Kodwa uyise kwesokunxele enkundleni yemidlalo, futhi umfana ayisekho ophasiswe kangaka uyakuthanda kuye kwesiteji.
Ngokushesha ngemva kwalokho, leonid abangane nge umshayi wezigubhu we-Opera, owayehlala naye egcekeni efanayo. Ngakho waya kuyi-opera, lapho afunda khona cishe yonke Arias sacula kahle.
Ngemva kwesikole, phambi ithalente abasha bekuwukukhetha - opera noma enkundleni yemidlalo. Kodwa ukuhlolwa nizithibe amakghono wabo, wasebenzisa elithi studio at Academic Drama Theatre. Gorky. Ngemva kokuthweswa iziqu, Kulagin kwaba kule drama yaseshashalazini njengoba kumdlali.
Leonid Kulagin: uthando ukuphila
Ukushiya emazweni abo umlingisi wenza uthando kuqala. Inkanuko ethanda, waya okwesikhathi abasha ubuhle-actress Chita, lapho ashada khona. Ngemva kokusebenza lapho kwesigamu isizini, lo mbhangqwana uthuthela Yaroslavl, umuzi ka-umkakhe. Kodwa ukuphila kwakungasalanga athuthukile. Uma abantu ehluke ngokuphelele, abelana, futhi leonid ayeyifake Lipetsk, lapho emenywa ngumqondisi yamabhayisikobho, Chita. Lesi sinqumo esiyingqopha-mlando ekuphileni kwezinceku kumdlali. Elapho, watholana nomkakhe wesibili U-Eleanor, okuyinto namanje nolimi. Manje indodana yabo Alex nomzukulu omdala kakade Kirill. By the way, ngokungafani noyise, uCyril ecabanga elandelayo ezinyathelweni kumkhulu wakhe futhi uye waqeqesha idrama iqembu Indlu abadlali.
Ngemva kokufunda ngezinye idrama esikoleni, Kulagin wathumela izithombe zabo kuwo wonke studios, ngokuba siqiniseke ngokuphelele ukuthi sikhalo salo njengoba ingane ekuthokozela ukunakwa eyengeziwe kusukela yilezozintombi. Kungazelelwe, kwafika ucingo kusukela "Mosfilm", by umqondisi Andrei Smirnov futhi leonid wanquma ukuthi cinema Soviet ngeke akwenze ngaphandle kwalo. Kodwa lowo mbono washintsha ngokushesha nje waba Funda iskripthi. Kwakungekhona igama, kodwa isidlaliso: Commissioner umshayeli, indoda ihhashi abami, nabanye. Ekuqaleni, umqondisi amlungiselele kuye indima yomuntu ubuso ihhashi. Ngakho kwaba khona ukubhujiswa ukukhohlisa umlingisi abasha mayelana ukukhangwa yakhe ekuseni.
Umdwebo Umlando edabukile, izikhulu bayalwa ukuba alibhubhise, ngibona nezepolitiki, kodwa sibonga montazhnitsa ezinye amabhokisi nge ifilimu ngasinda. Ngemva kwalokho, ifilimu ibuyiselwe, kodwa ngaleso sikhathi sase elahlekile ukuhlobana ngesakhiwo. Ezinye izigcawu ifilimu kwakufanele Mikhalkov-Konchalovsky, bebheka bonke umdlali yesikhulu. Ngakho leonid Lavretsky got indima "Isidleke Noble".
Ngemva kwalokho, le umlingisi wayebhekwa ngesikhathi evela ifilimu wokuqala esikisela ucansi "Autumn" ka-1974, lapho abangaphezu kwesigamu kwezahlakalo badutshulwe embhedeni. Leonid engumngane isethi kwakunenkosikazi yesazi umqondisi - Natalya Rudnaya.
Unkosikazi Eleanor Kulula Akumangalisi ukuphendula ngisho isibhamu uthembeke enjalo, kanye umlingisi uyaqiniseka ukuthi ngenxa lesi simo sengqondo nokuqonda baye wakwazi ukugcina umndeni.
Senzeka ngesikhathi ukuqopha futhi ngempela ukwazi izimo. Ngokwesibonelo, e-ifilimu "The Ballad we-Valiant Knight Ivanhoe" (1982) yesehlakalo yokugcina umlingisi ngephutha cishe ngosile uyaphila, uyamkhohlwa iboshelwe namathe phezu nomlilo ongokoqobo.
Okuningi ku isethi "Isidleke Noble" Kulagin wathola ucingo kwelinye amathiyetha yenhloko-dolobha, kodwa wayengafuni ukuba abe Muscovite. Ukuze wenze lokhu, umlingisi wathola izinkulungwane izaba kusukela esiphuthumayo ukusebenza ebalulekile babuka, nakuba ekugcineni namanje wathuthela lapho.
Yenza esiteji yenhloko-dolobha, ngokuvumelana umlingisi leonid Kulagin, kunzima njengoba ababukeli oqondayo funa njalo entsha imizwa, imibala kanye nemigqondo. kulula futhi Ubukhulu esifundazweni. Ngenhliziyo yami yonke ukuthanda eMoscow, wayengasakwazi, naphezu kweqiniso lokuthi wachitha iminyaka eminingi kuleli dolobha.
Ngemuva zokuqala kwezomnotho izinkinga umlingisi ubuyela esifundazweni - ukuphatha Theater Bryansk, kodwa hhayi isikhathi eside. Moscow ngokuphindaphindiwe ukusebenza enkundleni. Ekugcineni ukushiya yaseshashalazini Kulagin engu-35 kuphela kamuva, ngokushesha waqala ukuthuthukisa umsebenzi omusha - ukuqondisa. Izinyathelo zokuqala futhi kuphumelele ngempela kule nsimu, enza ezinkundleni zemidlalo yaseshashalazini. Ukuze ezifezwayo ifilimu kanye yaseshashalazini ngokuphindaphindiwe waba owawina imiklomelo ngisho wawina indondo yesiliva kumnyama. Okwamanje, leonid iyinhloko emgqeni art ngesikhathi ukukhiqizwa isikhungo esiyinhloko.
Leonid Kulagin: amabhayisikobho. Umsebenzi yesiteleka kakhulu
umlingisi Filmography kunalokho nzima, futhi liyaqhubeka likhula. Ngaphezu ohlwini ngaphambilini, leonid Kulagin uvele amafilimu elandelayo owaziwa:
"Mann" - omunye imidwebo wokuqala 1970;.
Kwaze kwathinta inhliziyo bo ifilimu "wami ekhaya - yaseshashalazini", wadutshulwa 1975;
"Ukuthethelela kimi, Alyosha" (1983);
"Ulondoloze, isikhathi charm ...", eyakhishwa ngo-1984;
"Ukuwohloka Afghan", esavela yethenisi 1991;
Futhi lokhu akuyona uhlu oluphelele namafilimu nge iqhaza lakhe, kukhona esanda kusungulwa muva nje isithombe, isibonelo, esasinedumela elibi, "Kulagin nozakwethu." Futhi, inani elikhulu imidwebo lempi zisusiwe, ezifana "Impi yase-Moscow" futhi "phambi Okuhambayo." Somewhere walaliswa Starring endaweni ethile episodic, kodwa ngaso sonke isikhathi, ngisho besebenza asekelayo izindima, uye wanikeza ngokuphelele iqhawe lakhe, uzama adlulisele ukugcwala semizwelo.
Futhi umsebenzi edume kunazo umqondisi Kulagin kukhona amafilimu ezifana "Drilling" (2007) kanye "Wolf" (1993). By endleleni, ngo ifilimu "Wolf" wakhuluma njengomuntu screenwriter.
Burak Ozchivit: uphawu Turkey biography ucansi
Ziyini izimpawu sinusitis e abadala kanye nezingane
Ihhotela "Alexandrovsky Garden", Sochi izithombe kanye nokubuyekeza